Xavi Hernandez oo tilmaamay xilliga uu rajeynayo inuu noqondo tababaraha kooxda Barcelona – Gool FM
(Doha) 28 Luulyo 2020. Tababaraha kooxda Al Sadd ee Xavi Hernandez ayaa albaabka u furay inuu noqon doono macalinka Barcelona mustaqbalka dhow, isagoo muujiyay in Barca ay kaga horreyso wax walba isaga ahaan.
Barcelona ayaa isku dayday inay la soo saxiixato Xavi Hernandez bartamihii xilli ciyaareedka dhawaan la soo gabagabeeyay ee 2019/2020 kahor inta aan shaqada laga ceyrinin Ernesto Valverde, balse wuxuu go’aansaday inuu la sii joogo kooxdiisa Al Sadd.
Haddaba Xavi Hernandez oo la weydiiyay su’aal ah suurtogalnimada ay ku dhici karto inuu noqodo tababaraha kooxda Barcelona mustaqbalka dhow ayaa wuxuu ku jawaabay.
“Waxba ma qarinaayo, mar walbana waxaan sheegaa, marka waqtigeeda la gaaro, waxaan joogi doonaa Barcelona, sababtoo ah ​​waa gurigeyga, tanina waa riyadeyda”.
“Laakiin hadda waxaan diirada saarayaa kooxda Al Sadd, waxaana rajeynayaa inaan la joogo xilli ciyaareedka cusub, wuu imaan doonaa waqtiga Barcelona, ha ahaato waqti dhow ama waqti dheer”.
“Laakiin wax walba ee intaas ka badan waa inaan ixtiraamo Quique Setién, waxaana u rajeynayaa kooxda wax walba oo wanaag ah”.